Liverpool Oo Si Cajiib Ah U Hareermartay Sharci Cusub Oo Premier League Lagu Soo Kordhiyay Kulankii Xalay Ee Norwich - Gool24.Net
Liverpool Oo Si Cajiib Ah U Hareermartay Sharci Cusub Oo Premier League Lagu Soo Kordhiyay Kulankii Xalay Ee Norwich
Liverpool ayaa jawaab qariib ah ka bixisay sharci cusub oo lagu soo kordhiyay Premier League xilli ciyaareedkan.
Sharciga cusub ee la soo kordhiyay ayaa ah in marka laad xor ah la soo tuurayo in ciyaartoyda kooxda laadka xor soo tuuraneysa ay ugu yaraan hal mitir u jiraan darbiga kooxda iska difaaceysa laadka xorta ah.
Wixii ka horeeyay xilli ciyaareedkan waxaa la ogolaa in ciyaartoyda ay dhex gaalan darbiga taasoo ay ka imaan jirtay is riix riix badan iyo inuu garsooraha soo kala dhex galo.
Laakiin tababare Jurgen Klopp ayaa la yimid hab cusub oo uu kooxdiisa faa’ido ku siiyo iyadoo ciyaartoyda aysan dhex gelin darbiga wax difaacanaya, waxaana uu ku amray ciyaartoydiisa inay darbi kale ka sameeyaan meel hal mitir ka horeysa darbiga kooxda Norwich, taasoo kubada ka qarineysa difaacyada iyo weliba goolhayaha.
Taatikadaan ayay soo bandhigeen markii Liverpool laad xor ah loo dhigay afka hore ee xerada ganaaxa Norwich ciyaarta oo 10 daqiiqo ay ka harsan tahay kulankii ay 4-1 ku badiyeen.
Ciyaartoyda Reds ayaana darbi labaad ka sameystay meel mitir u jirta darbiga kooxda Norwich City taasoo kubada ka qarisay gabi ahaanba goolka Tim Krul, taatikadooda ayaan ku dhawaatay inay shaqeyso iyadoo laadka xorta uu soo qaaday Trent Alexander-Arnold ay ku qasabtay goolhayaha inuu badbaadin weyn sameeyo.
Reds ayaana lagu eedeeyay inay wax lagu maadsado ka dhigeen sharciga cusub ee diidayay in ciyaartoyda weerarka ay dhexgalaan darbiga difaacanaya laadka xorta ah.
Taageerayaasha Premier League ayaana Twitter ku soo qoray in sharcigaan uusan sii waari doonin madaama ay Liverpool durbaba heshay si ay ku hareermaraan oo qasaaro u ah kooxda difaacaneysa laadka xorta ah.